Uluhlu lwabathengi kunye nefektri - China icandelo lokufakwa kunye notshintsho lwabenzi
Ecacileyo ukukhanya ukukhanya ukumiselwa ukumiselwa iseti
Le mveliso isetyenziselwa ukumiliselwa kweklinikhi yamachiza athambekele ekonakaleni kwe-photochemical kunye neziyobisi ezichasayo. Ngokukodwa kufanelekile ukumiliselwa kweklinikhi kwenaliti ye-paclitaxel, inaliti ye-cisplatin, inaliti ye-aminophylline kunye nenaliti ye-sodium nitroprusside.
Ukufakwa kumiselwe ukusetyenziswa kube kanye (i-DEHP yasimahla)
"DEHP izinto zasimahla"
Iseti yokungeniswa simahla ye-DEHP isetyenziselwa uluhlu olubanzi lwabantu kwaye inokutshintsha ngokupheleleyo iseti yokunyanzeliswa ngokwesiko. Iintsana, abantwana, abakwishumi elivisayo, abasetyhini abakhulelweyo, abasetyhini abancancisayo, abagulayo kunye nezigulana ezigulayo kunye nezigulana ezifuna ukumiliselwa ixesha elide zingayisebenzisa ngokukhuselekileyo.
Iseti yokumisela isihluzi echanekileyo
Ukungahoywa kwamasuntswana kungcoliseko lwe-infusion kunokuthintelwa.
Izifundo zonyango ziye zafakazela ukuba uninzi lweengozi zeklinikhi ezibangelwa kukufakwa ngaphakathi kubangelwa ngamasuntswana angenakunyibilika. Kwinkqubo yeklinikhi, amasuntswana amaninzi amancinci kune-15 μm ahlala eveliswa, angabonakaliyo ngamehlo kwaye ahoywa lula ngabantu.
TPE iseti yokucoca ukumiswa ngokuchanekileyo
Ubume bembrane yokumisa ukumiswa kolwelo olumanyanisiweyo kudibanisa imisebenzi yokumisa ulwelo kunye nemisebenzi yesisombululo. Umbane unokumiswa ngokuzinzileyo nokuba imeko yomzimba itshintshiwe kakhulu okanye ukumiliselwa kuphakanyisiwe ngequbuliso. Ukusebenza kuyahambelana, kwaye kube lula ngakumbi kuneseti yokumnika eqhelekileyo. Isakhiwo se-membrane sokumisa ukumiswa kokufakwa kokungena kwamanzi kukhuphiswano ngakumbi kwaye kunethemba elingcono lemarike.
Misa ngokuzenzekelayo ulwelo oluchanekileyo lokumisela ulwelo lokucoca ulwelo (i-DEHP yasimahla)
Misa ngokuzenzekelayo ulwelo oluchanekileyo lokumisela ulwelo lokucoca ulwelo
Ityhubhu yolwandiso (ene-valve yendlela ezintathu)
Isetyenziselwa ubukhulu becala ityhubhu efunekayo, ifaka iintlobo ezininzi zamayeza ngaxeshanye kunye nokufakwa ngaphakathi ngokukhawuleza.Yenziwe ngeendlela ezintathu zokusebenzisa unyango, iindlela ezimbini, ikepusi ezimbini, indlela ezintathu, ityhubhu yokubopha, umlawuli wokuhamba, ithambile ityhubhu, inaliti yenxalenye, isinxibelelanisi esinzima, ihabhu yenaliti（NgokwabaxhasiImfuno).
Ilungele ukugqabhuka kunye nomthamo, kwaye kulula ukuyisebenzisa.